Cheap High ikike Organic & onyinye fatịlaịza Granulator Machine Suppliers na Factory | YiZheng
Na Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator jiri ikike ikuku na-eme nke ọma site na nnukwu ọsọ na-agba ọsọ na-ebugharị na cylinder iji mee ka ihe ndị dị mma na-agwakọta, granulation, spheroidization, extrusion, nkukota, nkwekọrịta na ike, n'ikpeazụ ghọọ granulu.
Gịnị bụ New Type Organic & onyinye fatịlaịza Granulator?
Na Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator bụ akụrụngwa akụrụngwa a na-ejikarị na-emepụta fatịlaịza, fatịlaịza organic, fatịlaịza ndu, fatịlaịza na-achịkwa, wdg.
Isi na-arụ ọrụ mode bụ granulation mgbochi mmiri. Site na mmiri mmiri ma ọ bụ uzuoku, a na-emeghachi fatịlaịza bụ isi mgbe emechara ya na cylinder. N'okpuru ọnọdụ mmiri setịpụrụ, a na-eji ntụgharị nke cylinder mee ka ihe ndị ahụ na-eweta ike na-akụda ihe na agglomerate n'ime bọọlụ.
Gịnị bụ ihe ọhụrụ onyinye fatịlaịza granulator eji?
Nke a Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator bu ihe eji emeputa ahia ohuru nke ulo oru anyi na ulo oru ihe oru ugbo. Igwe ahụ enweghị ike ọ bụghị naanị ịkọ ọtụtụ ihe dị iche iche, ọkachasị maka ihe ndị na-eme ka eriri sie ike nke na-esiri ike ịnweta site na ngwa ọrụ, dị ka ahịhịa ọka, ihe fọdụrụnụ mmanya, mmiri ero, ọgwụ fọdụrụ, nsị anụmanụ na ihe ndị ọzọ. The granulation nwere ike mgbe gbaa ụka, na ya nwekwara ike na-enweta mma mmetụta nke ọka Ndinam ka acid na ọchịchị sludge.
Akụkụ nke ofdị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator
Bọọlụ guzobere bọọlụ ruru 70%, ike bọọlụ dị elu, enwere ntakịrị ihe nloghachi, ihe nloghachi pere mpe pere mpe, enwere ike ịtụgharị pellet.
Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulation Production Line Ebe a anyị nwere ike ịnye gị
10,000-300,000 tọn / afọ NPK onyinye fatịlaịza mmepụta akara
10,000-300,000 tọn / afọ mmepụta fatịlaịza akara
10,000-300,000 tọn / afọ nnukwu agwakọta fatịlaịza mmepụta akara
10,000-300,000 tọn / afọ amonia-acid usoro, Urea dabeere onyinye fatịlaịza mmepụta akara
10,000-200,000 tọn / afọ anụmanụ nsị, nri mkpofu, sludge na ndị ọzọ organic n'efu ọgwụgwọ na granulation akụrụngwa
Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Video Display
New Type Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Model Nhọrọ
Nke gara aga: Disc Organic & onyinye fatịlaịza Granulator
Osote: Typedị Ọhụrụ Organic & Compound Fatịlaịza Granulator Machine